Iingcebiso zokususa ivumba lokubila kwizambatho | Amadoda aQinisekileyo
Kukulungele ukwenza kwangoko kuqala kwaye unyange ngokukhawuleza impahla enukayo ukubila. Ngale ndlela, ivumba lokubila linokupheliswa ngokufanelekileyo kwaye, kwangaxeshanye, kuyathintelwa ukuba amabala lubhelu hlala unxibe ngokusisigxina.
Ukuba uqaphela ukuba iimpahla zakho zinuka ukubila nokuba sele zikhona Hlamba, ungasebenzisa iyeza elisebenzayo lasekhaya. Phakathi kwezinto ezininzi kukho nebhiKharbonati isoda exutywe namanzi. Isincamathelisi senziwa ngezi zinto zimbini zithanjisiweyo kwimpahla yasebukhwapheni, sishiyeke sisebenze ubusuku bonke.
Ukuba ukhetha njalo, endaweni yokufaka isoda njengoko kubonisiwe kwinyathelo elidlulileyo, ungongeza ikomityi encinci ye-bicarbonate kwisicoci esiqhelekileyo sokuhlamba iimpahla. Oku kukuvumela ukuba uyeke kwaye ususe ivumba lokubila ezingubeni zakho.
Esinye isisombululo sokuphelisa ivumba le ukubila Iimpahla kukusebenzisa iipropathi zeviniga. Yongeza iviniga mhlophe kwisiporizer kwaye udibanise nomlinganiselo ofanayo wamanzi. Emva koko, sasaza umxube kwiindawo ezinukayo kwaye uvumele uphumle malunga nemizuzu eli-10. Emva koko iimpahla ziyahlanjwa.
Ukongeza kwiviniga, lemon Esi sesinye isithako sendalo esisebenzayo sokususa ivumba lokubila kwizambatho. Unako kwakhona ukudibanisa ijusi ye lemon ngomlinganiselo ofanayo wamanzi, ngoncedo lwelaphu okanye isiponji, uze uthambise lo mxube kwiindawo ezichaphazelekayo.
Kuyacetyiswa ukuba ubeke iimpahla kanye emva kokuhlamba ukunqanda ivumba elimnandi. Iyavunyelwa yome emoyeni ovulekileyo kwaye akufuneki isetyenziswe ukuwisa isomisi ukuba ivumba alisuswanga, kuba ubushushu buqinisa ukudibanisa Ivumba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iingcebiso zokususa ivumba lokubila ezingubeni
"Macril": I-cream yokubola
Ngaba uyazi ukuba uza kunxiba ntoni kwimitshato eyoyikekayo, ubhaptizo kunye nomthendeleko?